Ukupholisa kwe-evaporative: kuyini, izici nokusetshenziswa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Enye yezinqubo ezenzeka ngokwemvelo futhi ezisetshenziselwa ukonga amandla yi ukupholisa evaporative. Kuyinqubo engokwemvelo esebenzisa amanzi njengesipholisi ukuze kutholakale umoya opholile noma ukupholisa. Ngenxa yocwaningo lokusebenza kwale nqubo, kungenzeka ukuthi kube nokupholisa okuphumelela kakhulu ezindaweni ezahlukahlukene.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, ukubaluleka nokusizakala kokupholisa okuphuma emhwameni.
2 Ukusetshenziswa kokupholisa okuhwamukayo
2.1 Ukonga amandla
2.2 Umthelela omncane emvelweni
2.3 Ukuphepha okukhulu
3 Izicelo zokupholisa evaporative
Ukupholisa kwe-evaporative akuyona enye into ngaphandle kwalokho inqubo yemvelo esebenzisa amanzi njengesipholisi. Le nqubo lapho kusekelwe khona umthetho wayo yonke imishini yefriji, imibhoshongo kanye nama-condensers. Lawa madivayisi asetshenziselwa ukupholisa uketshezi kuzo zonke izinhlobo zezicelo zentengiso, zezimboni nezasekhaya. Ngesikhathi sokupholisa evaporative, konke ukushisa okweqile kukhishelwa emkhathini ngokuhwamuka kwamanzi. Ukuze le nqubo yenzeke, kudingeka ukuxhumana phakathi kwamanzi nomfudlana womoya ngaphakathi kwendawo yokushisa.
Siyazi ukuthi lokhu kuphola kwe-evaporative kuhle kuzinhlelo zokusebenza lapho udinga khona ukukwazi ukunciphisa amazinga okushisa aphakeme. Ubuhle bale nqubo ngaphezu kwabanye ukuthi ukwehla kwezinga lokushisa kungenziwa ngaphandle kokusetshenziswa kwamandla ngokweqile. Ngakho-ke, Kungumqondo ozuzisa kakhulu ngokombono wamandla nokonga imvelo.
Ukusetshenziswa kokupholisa okuhwamukayo
Ngenxa yokupholisa okuhwamukayo, kunemibhoshongo eminingi yokupholisa, ama-condensers namanye amadivayisi afaka phakathi enye indlela esebenza kahle uma sifuna ukusebenzisa umkhakha obandayo wezimboni. Kulo mkhakha, imishini isetshenziselwa ukwehlisa izinga lokushisa futhi isebenzise amasu angabheki imvelo, wona, adinga ukutshalwa kwezimali okuphansi.
Ake sibone ukuthi yiziphi izinzuzo ezinkulu ezingasetshenziswa ukusetshenziswa kokupholisa umhwamuko.
Njengoba sishilo ngaphambili, Kuyinqubo efanelekile ngokusetshenziswa kwemali. Ukonga amandla okusetshenziswa kwamandla kuhlotshaniswa nokushisa okujiyayo kwesiqandisi esisetshenzisiwe. Uma sinokufakwa okujwayelekile, ukusetshenziswa kwamandla kungafinyelela izibalo eziphakeme impela, ngenkathi kufakwa okunesenzo esinzima sokuhwamuka, ukonga amandla okufika kuma-45% kungafinyelelwa.
Umthelela omncane emvelweni
Hhayi kuphela ukuthi sinokonga amandla ngenxa yokusebenzisa kahle izinsiza, kepha futhi kunomthelela ophansi kakhulu kwezemvelo. Ngenxa yokupholisa okuhwamukayo umphumela wokushisa okushisa ungancipha kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okufana ne-carbon dioxide kunqunyelwe ngokungaqondile. Ngenxa yokusebenza kahle kwenqubo, siyabona ukuthi kulahleka amandla amancane ngenxa yokusebenza kahle okuphezulu.
Enye yemibuzo yokupholisa evaporative ukuthi ngabe inikeza ukuphepha okukhulu uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo zokupholisa. Kuyindlela efanelekile yalezo zinhlelo ezingaqondile. Amazinga okushisa amanzi afinyelela kuma-25 degrees noma ngaphansi angafinyelelwa. Lokhu kuvumela ukusebenzisa phakathi kwezimfoloko zokushisa eziphakathi ezingakhiqizi izindleko zamandla eziphakeme kakhulu.
Ngakho-ke, kunemishini yesiqandisi evuporative efinyelela emazingeni okushisa aphansi kunalawo atholakala kwimishini epholile emoyeni. Ngakho-ke, ungabona ukonga okuhehayo impela, yize ukusebenza kubonakala kunciphe kakhulu ngamazinga okushisa kwe-bulb eyomile. Ngale ndlela, ukufingqwa kwamanzi ezikhungweni zefriji kwenziwa ezingeni lokushisa elifanele. Lokhu kushisa kuphelele ukuze ingcindezi engxenyeni ephezulu yesifunda sefriji iphansi kakhulu. Ingcindezi ephansi esifundeni sefrijini inciphisa ubungozi bokuvuza kwefriji kanye nomphumela ongaba khona kwezemvelo.
Enye inzuzo esingayibalula ngayo umthelela ophansi we-acoustic kanye nokwehliswa kokusetshenziswa kwamanzi. Amanzi ayimpahla eyigugu kakhulu futhi eya ngokuya iyindlala kule planethi. Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ngenxa yokwanda komphumela wokushisa okudala isomiso sivame kakhulu futhi siba namandla. Ngalesi sizathu, amanzi aya ngokushoda ngokwengeziwe. Ngalolu hlobo lwenqubo singonga ukusetshenziswa kwamanzi namandla. Lezi zinzuzo ezimbili zinikeza ukuphathwa okungcono kwemvelo.
Izicelo zokupholisa evaporative
Ake sibheke ukuthi iziphi izinhlelo ezahlukahlukene zokupholisa evaporative:
Inkukhu umkhakha: lezi zinhlelo zibaluleke kakhulu ezindlini zezinkukhu. Phakathi nezinyanga ezishisa kakhulu zonyaka, izinkukhu zishisa kakhulu. Ngenxa yesistimu yokupholisa evaporative, izinga lokushisa nezinkinga ezihlobene nokucindezela okushisayo kungancishiswa. Ngale ndlela, asiqinisekisi kuphela ukuthi izinyoni zihlala kahle, kepha futhi sithuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo.
Imboni yezolimo: ngomunye umkhakha lapho le nqubo ingasetshenziswa khona. Isiza ukugcina ukushisa komoya okuhlala njalo. Ukugcina lokhu kushisa kuzinzile kubalulekile ngaphakathi kwendlu yokushisa. Kubalulekile ukugcina ibhalansi ebucayi njengokushisa kwemali esetshenziswayo ukuze kukhuliswe ukukhiqizwa futhi kuncishiswe izindleko.
Umkhakha wezingulube: Ukugcina ukushisa okuhlala njalo ngaphakathi kwendawo yezingulube, ukusetshenziswa kokupholisa okuphuma emhwameni kubalulekile. Lokhu kunikeza ikhwalithi ephezulu ekukhiqizeni izilwane kanye nenduduzo engcono ngayo. Futhi ukuthi lolu hlelo luhlinzeka ngokushisa komoya okungaguquki ngekhwalithi ephezulu.
Imboni yezobisi: ngomunye wemikhakha lapho ukupholisa umhwamuko kunendawo. Ukucindezela okuqhubekayo kokushisa ezinkomeni kungaholela ekwehliseni ukukhiqizwa kobisi. Ngenxa yale nqubo, kungenzeka ukufezekisa amandla aphakeme okupholisa futhi kunciphise ukulahleka komkhiqizo ngesikhathi sokuphakama okukhulu kwamazinga okushisa angaphandle. Lezi ziqongo zivame ukufinyelelwa ngesikhathi sokuphela kwentwasahlobo nehlobo.
Ngamafuphi, singasho ukuthi ukupholisa kwe-evaporative okusetshenziswe njengesiqandisi okufakwa emibhoshongweni yokupholisa, ama-condensers evaporative, njll. Zibonakala ngokonga amandla okukhulu, ukuphepha okukhulu nokuhlonipha imvelo. Lokhu kwenza kube inqubo ebalulekile kunoma iyiphi ingxenye yezimboni ezibandayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokupholisa okuhwamukayo kanye nezinzuzo zako.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukupholisa kwe-evaporative